မိသားစုတာဝန်ထမ်းရင်း အသက် ၉ နှစ်နဲ့ ကြက်ကြော်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ ကောင်မလေး…
June 13, 2019 Thuta Star 0
တချို့ကလေးတွေဟာ ဖြတ်သန်းရတဲ့ ဘဝအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ရောက်ရှိနေတဲ့ အသက်အရွယ်ထက် ပိုမို ရင့်ကျက်နေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အသက် ၉ နှစ်ဆိုတဲ့ အရွယ်ဟာ ကလေးတော်တော်များများအတွက် ကျောင်းသွားမယ်၊ ကစားမယ်၊ အိပ်မယ်၊ စားမယ်ဆိုတာပဲ သိသေးတဲ့ အရွယ်မျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက Beel ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက […]
ချစ်သူ မွေးနေ့ ကို surprise လုပ်ဖို့ သွားရာမှ ရင်နင့်အောင် ကြေကွဲ ငိုကျွေးခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေး..
ချစ်သူ မွေးနေ့ ကို surprise လုပ်ဖို့ သွားရာမှ ရင်နင့်အောင် ကြေကွဲ ငိုကျွေးခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေး နှလုံးသား အရေးမှာ ရင်နင့်နေအောင် ချစ်ရတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူလေးက တခြားတစ်ယောက်နဲ့ သစ္စာဖောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်အပျက် မျိုးလောက် ဘယ်အဖြစ်အပျက် ကမှ ကြေကွဲစရာ အကောင်းပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့တွေ့ရင်တော့ အကောင်း၊ […]
အလှူငွေ (၁)သိန်းကျပ်ကို ပေါင်မုန့်ရောင်းတဲ့အဘွားအား လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို…
Myanmar Idol season3ရဲ့ ဒုတိယဆုရှင် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုဟာဆိုရင် သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ သူမရဲ့ သာယာချိုမြတဲ့ အသံလေးကြောင့် သူမကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသူလေးပါ။ နယ်ပွဲတွေမှာ အဆက်မပြတ် သီချင်းသွားဆိုနေတဲ့ မောင်ချိုက သူမရဲ့အနုပညာကို ပရိသတ်တွေထံ ချပြရင်းပျော်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ […]
ဒီလို မျဉ်းဝါ အမှတ်အသား – အိမ်ရှေ့ လမ်းပေါ်မှာတားထားတာကို “ မသိကြသေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်”….
“ မသိကြသေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်” ဒီလို မျဉ်းဝါ အမှတ်အသား တားထားတဲ့ အိမ်ရှေ့ လမ်းပေါ်မှာ– ၁- မိမိတို့ မော်တော်ယာဉ်များကို မရပ်မိကြပါစေနဲ့၊ ၂-အကယ်၍ ရပ်လိုပါကလည်း အိမ်ရှင်ကို အသိပေး ခွင့်တောင်းပြီးမှသာ ရပ်ကြပါ။ ၃- အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ အိမ်ရှင်က မကျေနပ်လို့ စည်ပင်ကို တိုင်းကြားလိုက်လျှင် […]
ချစ်သူတွေတော်တော်များများဟာ စတွဲခါစမှာ အရမ်းအဆင်ပြေ၊ အရမ်းချစ်ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်မဝဖြစ်နေတတ်ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ တဖြည်းဖြည်းသွေးအေးပြီး အချစ်တွေပေါ့သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြသနာတွေမဖြစ်ချင်ရင်တော့ သင့်ဖက်က ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာပါ။ (၁) စတွဲခါစကလို ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်မဆက်နိုင်ရင်တောင်မှ တစ်နေ့ကို ၃ကြိမ်လောက်တော့ အနည်းဆုံး ဖုန်းဆက်ပေးပါ။ (၂) ဘယ်သွားမယ်၊ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို သေသေချာချာပြောပြထားပါ။ သူများပြောမှ […]
မန္တ​လေးမှာ ညပိုင်းကျွဲဆွဲကန်ကားကြီးကွင်းကနေ အငှားလိုက်သွားတဲ့သုံးဘီးဆိုင်ကယ်သမားခရီးသည်၎ယောက်မှ နတ်ရေကန်းအနီး ဓားနဲ့ထိုးပြီး သုံဘီးလုယတ်မှုခံရပြီ။ သုံးဘီးပိုင်ရှင်သေဆုံးသွားပြီးတရားခံများမမိသေးပါ။ သုံးဘီးလည်းပြန်တွေ့ပါပြီ။ မြစိမ်းရောင်ခန်းမရှေ့ ၃၅ ၉၀ နားထားခဲ့တာပါ မနေည ၈း၀၀လောက်က အိမ်ကနေကျွဲဆည်ကန်ကိုဧည်သည်လိုက်ပို့ပြီး အထွက်မှာမြစ်ငယ်သွားမှာမို့လိုက်ပို့ခိုင်းတာလူ ၄ ယောက်တဲ့။ တစ်ယောက်ကအချောက်လို့ပြောပါတယ်။ လိုက်ပို့ရင်လမ်းမှာဆီဝင်ထည့်တော့ဆီဆိုင်ကပြောတာပါ။ သူကညပိုင်းဆွဲတဲ့သူမဟုတ်ဘူးတဲ့။ မနေ့ညကကြုံလို့လိုက်ပို့ဖြစ်သွားတာပါ။ ပြီးတော့ သူ့သုံးဘီးကမီးတပ်မထားဘူး။ ကားထဲမှာသူဆုံးတော့ဆေးရုံကနေဖုန်းဝင်လာတာ […]
နည်းနည်းလောက် ငံပါရစေလား….. ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဆိုင်ကယ်ဖမ်းရင်းဖြစ်တာပါ…..ဒါပေမဲ့အများပြည်သူသွားလာနေတဲ့နေရာမှာ …..ဒါမျိုးဖြစ်စဉ်ကတော့အရမ်းရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်…. ဆိုင်ကယ်ဖမ်းတာကိုအပြစ်မပြောပါ။ဆိုင်ကယ်ကိုဆွဲလှဲပီး ကယ်ရီသမားကိုထိုးတာပါ….ဆိုင်ကယ်လည်း သိမ်းလိုက်ပါတယ်တဲ့….. ဒါကိုကယ်ရီသမားက ဆိုင်ကယ်ဖမ်းတာကိုလူကိုဘာလို့ထိုးသလဲမေးတော့ ထိုးချင်လိုလထိုးတယ်ဆိုပဲ ….နောက်ပြီးလက်ထိပ်ဆွဲထုတ်ပြီးခေါင်းတွေကို လက်ထိပ်နဲ့ရိုက်တယ်တဲ့…. ဆောက်ခွက်တွေစုတ်ပြတ်သတ်နေတာ ဘေးလူမြင်မကေါင်းပါဘူး …..ဒါဘယ်လိုမှမဖြစ်သင့်ပါ။နောက်ပြီး တာဝန်ကျရဲတပ်သားအနေနဲ့ကလည်း ရဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီရေးယူရင်မရဘူးလား…… ခုဟာက ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို လုံခြုံအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်က ယူနီဖောင်းတောင်ချွတ်ပြီး ဖြဲတဲ့အဆင့်ကတော့ တော်တော်လူပါးဝတယ်လို့မြင်မိပါတယ်…. […]
မန္တလေးကျုံးအရှေ့ဘက်တွင် မည်သူမဆို အခမဲ့စားသုံးနိုင်သည့် Food Box
မန္တလေးကျုံးရဲ့ အရှေ့ဘက် ၆၆ လမ်း၊ ၂၂ လမ်းနဲ့ ၂၃ လမ်းကြားမှာ လူမျိုးဘာသာ အဆင့်အတန်းမရွေး မည်သူမဆို အခမဲ့ဝင်ယူ စားသုံးနိုင်တဲ့ Food Box တခုကို ပရဟိတ အဖွဲ့တခုက စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ Food Box နေရာမှာ အရင်က အခမဲ့စာကြည့်တိုက်ပုံးရှိခဲ့ပေမယ် […]
13.6.2019 မှ 19.6.2019 အထိ တစ်ပတ်စာ( ၇ ) ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . . .
တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . . . 13.6.2019 မှ 19.6.2019 အထိ တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း အလုပ်တွေများနေတာကြောင့်ပဲ အချိန်တွေဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိအောင်ဖြစ်ရတတ် ပါတယ်။ အပင်ပန်းခံမှုတွေကြောင့်လဲ ၀ီရိယအကျိုးတော့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဖခင် ဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့အထက်လူကြီး ကျန်းမာရေးညံ့နိုင်တာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းတာ၊အလုပ်တာဝန်ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အပြောင်းအရွှေ့လုပ်မယ်လို့ သတင်းကြားနေရင်တော့ မိမိနယ်ပြောင်းရ တဲ့အထဲပါတတ်ပါတယ်။ […]
ညနေစောင်း ကျောင်းဆင်းချိန် နမ့်ဖလွန်းရွာအထွက်နားလေးမှာ ကျောင်းသား၂ ယောက် ကားတားလို့ရပ်ပေးလိုက်သောအခါ…
ကျေးဇူးပြု၍ စာကိုဆုံးအောင် ဖတ်ပေးပါ ကားဆရာ အပေါင်း သူတော်ကောင်း တို့ခင်ဗျား… မနေ့ က ညနေစောင်း ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ မန်လွယ်ဖက်ကလာရင် နမ့်ဖလွန်း ရွာ အထွက် နားလေးမှာကျောင်းသား၂ ယောက် နဲ့ ကျောင်းသူ ၂ ယောက် ကျွန်တော့်ကားတားလို့ ရပ်ပေးလိုက်တာ ….. ကလေးတွေက […]